Motorsport | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
ohatrinona ny car formula 1
ohatrinona ny vidin'ny fiara Formula 1 "Ny vidin'ny fiara Formula 1 dia mety hahatratra $ 600 ka hatramin'ny iray tapitrisa dolara" dia lainga mivaingana, satria i Maria Morgun nilaza tamiko tsara hoe: ...
Formula 1 racers malaza indrindra
Ny mpihazakazaka malaza indrindra amin'ny Formula 1 dia Schumacher ankehitriny. Ny olona tamin'ny taranaka hafa dia nanana sampy hafa - Alain Prost, Ayrton Senna. Senna Aerton Senna (hatramin'ny tapaky ny taona 90) Taty aoriana - Schumacher Mazava ho azy Schumacher Amin'ny ankapobeny ...
Inona no atao hoe slalom?
Inona no atao hoe slalom? Teny - SLALOM: Amin'ny fanatanjahan-tena: hetsika haingam-pandeha haingam-pandeha. -gady sy goavambe c. fidinana avy any an-tendrombohitra amin'ny ski eny amin'ny lalana lava. Vohitra fitsangantsanganana rano Rivotra s. amin'ny ...
Inona no haingam-pandeha indrindra amin'ny fiara 1?
Inona ny hafainganam-pandehan'ny fiara Formula 1 araka ny lazain'ny Sportbox.az momba ny GrandPrix247, nidina haingana 2,2 km / ora i Bottas tamin'ny zotra 378 kilometatra mahitsy amin'ny lalambe Baku. Ny firaketana ny hazakazaka teo aloha dia ...
0113 - Fanamafisana ny hafanan'ny hafanam-po, avo nivoitra.
0113 - Mpandray mari-pana momba ny mari-pana amin'ny rivotra, mari-pamantarana avo lenta. Ao amin'ny sensor "Boshevsky" mikoriana amin'ny rivotra marobe, tafiditra ao ny sensor ho an'ny mari-pana. Amin'ny toe-javatra misy anao dia toa izany ihany. Raha misy lesoka roa ary sensor an'ny fikorianan'ny rivotra ...
80 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,873.